Cycgba ígwè ọ dị mma maka ọrịa Parkinson? - Cygba Ígwè
Isi > Cygba Ígwè > Gba gburugburu na ọrịa ọrịa Parkinson - mkpebi ndị dị mkpa
Gba gburugburu na ọrịa ọrịa Parkinson - mkpebi ndị dị mkpa
Cycgba ígwè ọ dị mma maka ọrịa Parkinson?
Idingnya n'ime ime ụlọigwe kwụ otu ebeụbọchị atọ kwa izu na-egosi ibelata okeIhe nke Parkinsonihe mgbaàmà, dị ka ọmụmụ ọhụrụ e bipụtara na Lancet Neurology.12.09.2019
Mgbe mbụ a chọpụtara m, dọkịta m kwuru, sị, 'Ikekwe mgbe ị gbara afọ iri anọ, ị ga-anọ n'oche nkwagharị.' M dị afọ iri anọ na atọ taa. O nweghị oche ọlụsị.
Aha m bụ Jimmy Choi, achọpụtakwara m na m nwere ọrịa Parkinson mgbe m dị afọ iri abụọ na asaa. Ezutere m Cheryl n'ụlọ akwụkwọ sekọndrị. Ya mere, anyị bụ ndị ụlọ akwụkwọ sekọndrị.
Ọ bụ onye na-eme egwuregwu, abụ m onye nzuzu na ụlọ akwụkwọ sekọndrị. JIMMY: Ọ bụ bọọlụ abụọ na ịlọta ụlọ, mgbe ahụ anyị lụrụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ozugbo anyị gụsịrị akwụkwọ na kọleji. Nna m na-ekwukarị, 'Ọ bụrụ na ị lụọ di ma ọ bụ nwunye ma dị njikere inwe ezinụlọ, ị ga-azụta mkpuchi ndụ, chebe ezinụlọ gị.' , Emere m, ọ bụkwa n’ezie nọọsụ ahụ bịara wee mee ule m chọpụtara ihe banyere m nke m na-echetụbeghị mbụ.
Achọghị m ikwere na ọ bụ nke Parkinson. Enwere m mmetụta na enweghị ike n'ihi na amaghị m ihe ọrịa Parkinson bụ. A tookụrụ m ọgwụ ahụ, ma afọ asatọ sochirinụ, ọgwụgwọ m agbanweghị.
M n'ezie were nnọọ a bit kwa ly. Enwetara m ihe dị ka 240 ruo 250 n'arọ ma daa nke ọma ka m wee jiri osisi na-eje ije. Ihe niile siri ike nke mere na nkụda mmụọ malitere.
My ala bịara n'ezie mgbe m na-ebu m mgbe ahụ, 10 ọnwa ochie nwa Mason na akwa mgbago na m furu efu m itule na anyị abụọ dara a dum ụgbọ elu akwa mgbago. CHINEL: Ọ jọgburu onwe ya. M ghọrọ ihe ahụ? Ihe ize ndụ nchebe nye ezinụlọ m.
Ọmarịcha ọrụ. Zọ iji ọsọ pụọ ebe ahụ. Huh? N'oge ọdịda a, echere m, sị, 'Gịnị ka m ga-eme iji mee ka ọnọdụ m ka mma?' Enweghị ọgwụgwọ.
Achọrọ m ịhụ ihe m ga-eme iji gbanwee nke ahụ. Enwere ule ikpe na-adighi ebe niile, ya mere echere m, hey, nke ahụ bụ ihe m nwere ike ime. Imirikiti ọmụmụ ihe emere na afọ ole na ole gara aga gbadoro ụkwụ na mgbatị ahụ.
Enwere m mmasị ịmụ ihe mmega ahụ na ndị nwere ọrịa Parkinson na gburugburu 2001, dị ka ime ka akwara nwee ike mgbe ị na-emegharị. Ndị na-arịa ọrịa Parkinson adịghị ike. Njikọ nke adịghị ike na usoro mmegharị ahụ ike na-adịghị mma dugara m ịtụ aro nyocha nyocha iji nyochaa mmetụta nke mmega ahụ mmegide na ihe ịrịba ama nke ọrịa Parkinson.
Anyị gosiri nke ahụ. Emepụtara usoro mmega ahụ Jimmy na New York Times n'afọ gara aga. Activkpụrụ mmegharị akwara ka mma.
Ha we veryuria nke-uku. JIMMY: Ka m na-emega ahụ, otú ahụ ka ọ dị m. Aga m emekwu ya. ”Mgbe m gwara Karina na m ga-abụ onye Amụma Ninja nke America na nke mbụ ya, ọ na-ada ụda karịa ihe ọ bụla m nụtụrụla.
Obi tọgburu ya atọgbu karịa m. Maka m enwere ụjọ.
You ma ihe m batara? Yabụ, n'ụzọ ụfọdụ, Northwest Medicine bịara napụta. Gịnị ka ọ pụtara bụ́ ịnabata ihe ịma aka a? Kedu ihe nke ahụ pụtara maka ọgwụ na ọzụzụ ya? JIMMY: Taa, e jiri ya tụnyere afọ asatọ gara aga, enwere m ihe dị ka ọkara ọgwụ m Iụrụ. Ọ bụghị naanị na ọ na-akwụsị ọganihu, ọ na-enye m afọ ole na ole azụ na enwere m ike furu efu.
Y’oburu na inwere Parkinson, otutu ihe n’emehie. Yabụ ịchọrọ ndị ọkachamara dị iche iche iji nyere gị na nnukwu ụlọ ọgwụ aka ịnweta ha, nwee ezigbo nka, ma nwee ike inye aka n'akụkụ niile nke ọrịa a. JIMMY: Mgbe ọ bụla m chetara ndị ọrụ m na-elekọta na northwest, m na-echeta ndị enyi m, nihi na ọtụtụ afọ ha aghọọla.
Ha na-anabata ara m banyere ịnwa iru n'ọkwa ọzọ ma echere m na nke ahụ bụ ezigbo mmekọrịta. Ndị mmadụ na-ajụ m, 'know mara, ị na-agba ọsọ marathon n'ime awa atọ na nkeji 40' ma ọ bụ ''ve nweela ike ịlụ ọgụ na American Ninja Warrior maka afọ atọ n'usoro. Nwere ike iche n’echiche etu ị ga - esi sie ike ma ọ bụ otu ị ga - esi gbaa ọsọ ma ọ bụrụ na ịchọghị ịrịa ọrịa Parkinson? Azịza m dị nnọọ mfe, ọ dịghị mgbe a chọpụtara na m nwere ọrịa Parkinson, agaghị m eme ihe ndị a.
Kedu ihe omume kacha mma maka ọrịa Parkinson?
Mmega ahụ ike nwere ike ime ka ọrịa Parkinson kwụsịlata?
Ikgba ọsọ, ịgba ọsọ, Tai chi, yoga, Pilates, ịgba egwu, ọzụzụ dị arọ, ịkụ ọkpọ na-abụghị kọntaktị, qi gong na ndị ọzọ - ha niile nwere mmetụta dị mma na mgbaàmà PD. Ọ dịghịmmega ahụndenye ọgwụ ”nrimaka onye ọ bụla nwere PD.
Ejiri m ọtụtụ egwuregwu bọọlụ, m wee chụọ nta ma fọdụ, ana m ahapụ ihe niile - Ọ na-abụkarị ibu ọnụ, na-arụsi ọrụ ike. NA MAGA PARKINSON Ọ B A ỌRIN SLD SL AH DOWN. - P PRR THE KWES THER THE M KWES THATR TO ịdọrọ - Ọ dị ka ịka nká tupu oge gị, ịmara na uche gị chọrọ ịme ihe ahụ gị anaghị ekwe.- Ọ nwere ọtụtụ nsogbu na-akwụ ụgwọ.- Ọ ga-adị ka iwu gị , FEkwụ gị ga-enwe na CONCRETE.NA A NA-EWU EGO, NA Y NA-AKA YOU P OTA NA-EWETA YOURLỌ Gị NA YOU B'GH W ALBUO Ọ B HE Ọ B SOM Ọ BONE Ọ BOTR F NA-adaba kwa ụbọchị.
E Nwere Ezi 3zọ 3 NT THATKWU CANBỌCH CAN P CANR CAN CANB CANR CAN ND CAN ỌR H PARKINSON NA-EME N’Ezie. OTU BRE Mgbochi, Otu bu ugwo na otu bu site na enweghi mmekorita iji mee ka iga, echere m na mmega ahu di nkpa iji gbochie ihe na-eme n'ihi na anyi adighi adighi oru, dika ije ije. B.
ỌRART ỌR OR M ORM OR KA Ọ BACKBU IWU Mgbu obi. MGBE ANY WE NA-ECHE EGO EGO ION, MGBAGHACHI GA-ENYERE G YOU KWES YOUR COM KWES'SR'S Ọrịa PARKINSON NA-ACHỌ BYZỌ ND OTHER ỌZỌ MOVZỌ NA-EME KA Ọ D SA MMA. Ya mere, MGBE ọ bịara na-enweghị ọrụ, mgbatị dị ezigbo mkpa n'ihi na anyị na-eche na ọ na-agbanwe ụbụrụ - MGBE M nwetara n'ụlọ akwụkwọ ọgwụ na ụbụrụ gị ghọrọ ihe ị mụrụ na ha na-eduzi ha n'oge ndụ gị.
Nke mbu bu, M ga-eme nke a nani. MA Ugbu a amatawo na ụbụrụ nwere ike ịgbanwe na ịgbanwe na ndụ, anyị makwaara na ụbụrụ na-agbanwe mgbatị maka ihe atụ, na-arụ ọrụ na ụmụ oke na-ajụ ajụjụ na anyị enweghị ike ịza azịza dị na mbara igwe. CH NA-AGBANWE? '- ANY WAN chọrọ ịma ihe dị na ụbụrụ, na naanị ụmụ anụmanụ nwere ike iche na nke a. EJI MALITE NA-EME ỌR P PARSONSON MERE IJI.
bass anyịnya igwe na-eji
Ihe anyị na-eme bụ igosipụta anụmanụ maka oge ụfọdụ wee kpebie ma ọ bụrụ na mmega ahụ na-arụ ọrụ ma ọ bụ na ọ bụghị. Ihe anyi nwere olile anya bu na anyi jiri ihe nlere anya anyi mee ka anyi gosiputa na ngwangwa nwere ike gosiputa ntughari nke ntugharia nke ndi mmadu.- Nchoputa ndi isi dika ndi nwere ike ime ka anyi mata ihe anyi nwere. RA BRA Brain.- Echi. - HI.- MERE EREH RR.. - Ọ D AT - N’Ole 2:00 PM - MR.
BOYD B PART NKE AKW OFKWỌ TLỌ Ọzụzụ nke dị iche iche dị iche iche ma lee anya otú o si emetụta ọrịa gị nke ParkinSON, MA Ọ B YOUR Ọ B YOUR Ọ B YOUR Ọ B YOUR Ọ B, Ọ B AND Ọ B AND Ọ B AND Ọ BK Ọ B, Ọ B, Ọ B, Ọ B, EGO. - KA ANY THAT NA-ECHI NA MBIR MNDE MGBE M B IR I M NA-ECHE NA 'Ọ GA-AD HAR S' Ike 'Ebe ọ bụ na enweghị m ike iguzo na bọọlụ na m ga-etinye otu ụkwụ na ndị ọzọ nwayọ. MA M KWES --R K - B KR YOUR IHE Ibu gị N'iru OTkwụ gị, Gbaa mbọ hụ na ọ bụ.
OZI! - ANY HAVE KWES SPRAR WELỌ SENSORS
M ga-etinye otu na aka ekpe gị aka, ỌZỌ anyị nwere ike ịhụ ihe ogwe aka na-eme ka ị na-eme njem. NA ANY B NA-EME NTEG NA NGWU NA AH ON YA. ANY US NA-EWERE NDSE A N'TOLỌ NCHE N'HLỌ AH THE.
Ọmụmaatụ, Ọ B IFR HE na ọ ka na-eguzo ka, dị ka enwere ike, anyị ga-eji otu n'ime ihe nyocha na eriri ya iji tụọ akwụkwọ ya. Nwere ike imechi anya gị? ANY CAN nwere ike ịlele ọnụọgụ nke anụ ahụ tupu ọzụzụ na mgbe na-esote usoro ọzụzụ. MGBE anyị na-eje ije, anyị na-asị, 'Kedu ka nzọ ụkwụ ya si dị ukwuu?' Olekwa ka o ji ogwe aka ya na-agha? Di Ya Ọ̀ Na-eme Elu Mgbe Ọ Na-eje ije? NA ANY EX NA-atụ anya ime ka usoro ya dị mma nke anyị ga-ahụ na-eme nke ọma na usoro ndị a.
Ebe dị ọcha ebe a bụ ụzọ gị na-aga n'ihu na azụ na ụzọ aka ekpe gị ziri ezi ma ọ bụrụ na ị bụ anya gị n'ihi na ha nọ na ihu ihu. MGBE Usoro a nke izu anọ nke ọrụ dị egwu na onye na-eme ihe ike na anụ ahụ, ọ hụghị ya n'anya na ọ na-enwe mmetụta dị ukwuu na ụkwụ gị. Ọ PURNRURN ARGBA NA N’AKA N’ANWEGH L itule.
N'Ezie ya nwere mmetụta na mmemme ọzụzụ mere ya ọtụtụ mma.- n'ihi na otu ọnwa m mere ihe niile naanị REgbalị NA TAI Chi na igbe na Nke a dị iche.- M hụrụ n'anya JIM na anụ ahụ na-ahụ na hụrụ m. OMUME NILE.
M na-eju anya otu o si eme ya.- Ọ dị m ka m bụ onye nkiti.Enweghị m ezigbo oge na oge PARKINSON.- AKW THEKWỌ NDER NA-EME NT EFKWU ND EF NA-EME, Ọdịmma na ịghara imezu ọ nwere ike ikwu, A GA-AH SE M N'OGE NA-EME NKE FOR GA-EME NA-EGWU.
Ọ B A CHB LR WH oge ebe ọzụzụ gị ghọrọ akụkụ nke ọrụ Routino nke ndụ kwa ụbọchị - MR. BOYD KWES TOR TO IME NA ỌR HIS PARSONSON Ọrịa ya mere ka ọ ghara ịdị na-egbochi ya na ndụ ya, A NA-EBU M EBU ỌR HIS NA Ọ NA-EME NA Echere m na ọ na-enyere ya aka n'ezie. Echere m na ọ dị ezigbo mkpa.
Ọ NA-Arụsi Ọrụ Ike. O nwekwara ezinụlọ nke na-akwado ya ma na-enyere ya aka ma na-azụ ya - O nwekwara ezigbo nwanyị ọ na-akwado - echere m na ọ bụ m ka m mee ya obi ụtọ n'ihi na ọ bụ onye na-eme m obi ụtọ ma ọ nọ n'ime m. - N’AGBATAGH I M, Agaghị m emeli ya.
Anyị anọkọala kemgbe anyị 16. NT S Ọ maara ihe niile gbasara m na m maara ihe niile gbasara gị.- Ihe 4 dị mkpa na mmemme mmega na-agbasi mbọ ike, na-atụgharị uche na zuru ezu. A NA M EME TAI CHI, ANY WE NA-EGO MA Ọ B OR NA M GAGO GYM.
Ihe mgbaru ọsọ m bụ ụbọchị isii, M gwaziri DR. AH N, NA Ọ KWURU, 'Ọ D' MMA. KA ANY DO MEE 7’’- M Gbanyere ndị ọrịa site n’ịzụ ọzụzụ naanị maka na m maara ihe ọ na-eme na nhazi usoro ọmụmụ - M nwere isi mmalite kwere na ị ga-agbanwe ụbụrụ Ọ BENLA ỌZỌ na-akụziri unu ọgwụ. - NERihi nke a, ọnụọgụ nke mmụba nke mmega ahụ dị ukwuu karịa ụfọdụ ọgwụ ọgwụ ọjọọ - enweghi mmetụta ọ bụla.
Ọ B ONL naanị uru bara uru - Ọ B IFR IF na m nwere ike izere ihe mgbaàmà ndị a site na mmega ahụ, G WHATN A BTER EGO Dị Mma. P SRIT ITNỌRỌ NA PARKINSON NA IZU MA Ọ B YOU CAN P GR THE Ngwaọrụ ị nyere na omume na nrụpụta n'ụzọ dị mma. Mara ihe ahia.- Ọ P KREE YOUB YOUR HE AH HE AHAL AH,, IKE NA MGBE Ọ B MIN Ọ B AND Ọ B IS Ọ B IS Ọ B WOR INB INR IN INBARA NA YOURLỌ ỌR YOUR gị.
Ọ na-ebelata oke akara na mgbaàmà nke ọrịa - Ọ na-eme nnukwu ọdịiche. Ọ na-adị gị ka ị nabatara ya - Ọ bụ dị ka onye mbụ ya. Ọ dị mfe ịlaghachi na oge - ọtụtụ ihe ewepụrụ m si na m lọta.
Ọ dịghị mfe ikpuchi
Anaghị m ugbu a.
Nwere ike ịkwụsị ọrịa Parkinson ka ọ ghara ịga n'ihu?
Mmegadị mkpa maka ndị nwereIhe nke Parkinsonọrịa n'ihi na ọ na - enyere aka ijigide nguzo, agagharị, na ikike ịme ihe kwa ụbọchị. Ndị na-eme nchọpụta achọpụtala naIhe nke Parkinsonndị ọrịammega ahụọ dịkarịa ala awa 2 1/2 kwa izu na-enwekwa aJiri Nwayọọojuju ndu ha.
Kedụ ka ị ga - esi melite oria Parkinson?
Ọgwụ ewepụghị, enwere ọtụtụ ụzọ ndị mmadụ si ebiỌrịa Parkinsonnwere ikemeliteahụike na ọdịmma ha, chekwaa ọrụ anụ ahụ, belata mgbaàmà yanawelieogo ndụ. Otu n'ime ha bụ imega ahụ́ mgbe niile, iri nri na-edozi ahụ́, ide mmiri ara ehi ụra na ihi ụra nke ọma.
Enwere ike ijikwa Parkinsons?
Ọrịa Parkinson nwere ike'a gwọrọ ya, mana ọgwụnwere ikeenyere aka ịchịkwa mgbaàmà gị, na-abụkarị n'ụzọ dị egwu. N'ọnọdụ ụfọdụ dị elu karị, a pụrụ inye ndụmọdụ ịwa ahụ. Dọkịta gị nwekwara ike ịkwado mgbanwe mgbanwe ndụ, ọkachasị mmega ahụ aerobic.Dec. 8 2020
Kedu ihe na-eme ka ọrịa Parkinson dịkwuo njọ?
Ihe nke Parkinsonmgbaàmà na nchekasị. Ọ bụ ezie na ịma jijiji na-echekarịnjọmgbe mmadụ na-echegbu onwe ya ma ọ bụ nwee nrụgide, ihe mgbaàmà niile nke PD, gụnyere nwayọ, isi ike, na nsogbu itule, nwere ikenjọ. Ọrịa, karịsịa ịma jijiji, nwere ike ghara ị responsụ ọgwụ.Ọnwa asaa 17. Dec 2019
Kedu oge mgbaàmà ọrịa Parkinson ka njọ?
Akinesia ụtụtụ bụ otu n'ime nsogbu mberede na nsogbu mbụ na ndị ọrịa PD, na-emetụta ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ usoro niile nkeọrịa.June 15. 2016 Nọvemba
Enwere ike ijikwa Parkinsons na-enweghị ọgwụ?
Ọgwụewepu, enwere otutu uzo ndi mmadu ji ebiIhe nke Parkinsonọrịanwere ikemeziwanye ahụike na ahụike ha, chekwaa ọrụ anụ ahụ, belata mgbaàmà ma bulie ogo ndụ. Otu n'ime ha bụ imega ahụ́ mgbe niile, iri nri na-edozi ahụ́, ide mmiri ara ehi ụra na ihi ụra nke ọma.
Kedu ihe ị ga-eri ma ọ bụrụ na ị nwere ọrịa Parkinson?
Emelarieọtụtụ nri na mmanya shuga dị ka ndị anwere ikemmetụta na-adịghị mmanke giusoro mgbochi. Na-ahọrọ nke ọmanrima belatanke gioriri shuga ijikwaIhe nke Parkinsonmgbaàmà. Emelarieoke protein. Iri oke ehi, azụ, ma ọ bụ chiiz nwere ike imetụta ịdị irè nke ụfọdụIhe nke Parkinsonọgwụ.23.01.2018
Nwere ike onye nwere ọrịa Parkinson gbaa igwe kwụ otu ebe?
'Cycgba ígwè ọ na-enyere ndị nwere ọrịa Parkinson aka?' Ọ bụ ezie na anyị agaghị asị na ọ na-enyere onye ọ bụla nwere ọrịa Parkinson aka, ma ọ bụ na ọ bụ mmega ahụ ị ga-emerịrị ma ọ bụrụ na ịchọrọ ibi ndụ nke ọma na nke Parkinson, nchọpụta ọmụmụ egosila na ọtụtụ mmadụ enwetala nnukwu uru site na ịkwanye pedal na mgbe niile.
Kedu ihe kpatara klaasị ịgba ịnyịnya ụlọ ji dị mma maka ndị ọrịa Parkinson?
Onye so na ya nwere ike ịbanye na gburugburu ebe a na-achịkwa ka a na-ele ya anya ma na-azụ ya n'ụzọ kwesịrị ekwesị. Nkwado nke otu klas ahụ na-akwalite ahụmịhe ahụ ka omume mmega ahụ wee bụrụ usoro na akụkụ nke ndụ ụbọchị ọ bụla. Enwere uru ndị ọzọ nke Mmemme ịgba ígwè nke Parkinson.
Onye bụ egwuregwu kacha mma ịgba ịnyịnya ígwè maka ọrịa Parkinson?
Zute Master Parkinson's Cycling Coach Kathy Helmuth ma mụta otu ị ga-esi zụlite ka ị bụrụ onye nkuzi ACE a nabatara na Parkinson's Cycling Coach site na ịge ntị na mgbasa ozi ọkwa anyị n'okpuru. Jiri igodo Elu / Ala gbadaa ma ọ bụ belata olu.
Portland Maine ugwu biking
Portland maine Mountain biking - nkọwa zuru ezu
Portland Maine igwe kwụ otu ebe? Tọ ụtọ Portland na igwe kwụ otu ebe gị dị mfe ma na-atọ ụtọ. Njikọ ndị America Bicyclists na Washington, D.C. kpọrọ Maine dị ka obodo nke abụọ kacha nwee mmekọrịta igwe kwụ otu ebe na mba ahụ!
ihe ị ga-achọ mgbe ịzụrụ igwe kwụ otu ebe
Ihe ị ga-achọ mgbe ịzụrụ igwe kwụ otu ebe - otu esi enweta
Kedu ihe m kwesịrị ile anya mgbe ịzụrụ igwe kwụ otu ebe? Ndị a bụ ihe ole na ole iji nyochaa ka ị na-edozi site na ntanetị azụmaahịa ịntanetị iji zere ịdọkapụ. Okpokoro ma ọ bụ ndụdụ mebiri emebi na-eme ka igwe eji igwe rụọ abaghị uru. STEERER & AKW HEKWỌ. AKWHEKWỌ NA AKW .KWỌ. IVLỌ ỌR.. N'okpuru uwe mgbokwasị & BRAKES.10 окт. Ugochukwu Onwuchekwa
igwe kwụ otu ebe
Okpokoro okpokoro okpokoro - mkpebi ndị dị irè
Kedu ihe kacha mma maka igwe? Aluminom. Emere ya dị ka ihe maka okpokoro agba ịnyịnya ígwè banyere 30 afọ gara aga, aluminom bụ ihe a na-ahụkarị. Ọ dị ntakịrị karịa nchara, n'ihi ya, ọ na-ebute okpokolo agba. N'ihi njupụta ya na-ebelata, ọ na-achọ ka dayameta buru ibu buru ibu iji nweta ike zuru ezu maka etiti igwe kwụ otu ebe.
Zwift bike - ịza ajụjụ ndị a
Kedu igwe igwe na-arụ ọrụ na Zwift? Ndị a Zwift anyịnya igwe dakọtara bụ: Schwinn IC8.Keiser M3i.Wahoo Kickr.WattBike Atom.Stages SC3.Tacx Neo.Concept 2 BikeErg.BodyBike Connect.
ụzọ ụkwụ igwe kwụ otu ebe dị m nso
Bikezọ ụkwụ igwe kwụ otu ebe dị m nso - azịza na-adịgide adịgide
Ebee ka m nwere ike ịhụ ụzọ ụkwụ igwe kwụ otu ebe? Nke ahụ kwuru, ụzọ ochie bụ oge kachasị mma Soro ndị otu na-agba ịnyịnya ma ọ bụ ọgbakọ. Yep, ụzọ kachasị mma iji chọta ụzọ ụkwụ ka ga-achọta ndị mmadụ igosi ha gị. Jiri ngwa na map. Chọọ na Strava. Youtube bụ enyi gị. Gaa ọsọ ọsọ ma cheta ihe ị gbara. Soro imi gị.5 рар. 2021 г.
Plank ugwu climber - esi edozi
Ndi ugwu a ka elu ka osisi? Uru Elu Ugwu Na-arị Elu bu nnukwu mgbanwe na ọkọlọtọ Plank. Isi gị ugbu a kwesịrị ịkwado ma mee ka ọkpụkpụ azụ gị kwụsie ike mgbe ụkwụ gị na-agagharị kama ijide ọnọdụ naanị dị ka Plank.2 мар. Ugochukwu Onwuchekwa